Ilaah waa shucuureed, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
"Wiilashu ma ooyaan."
Haweenku waa shucuur.
Ha noqon qof xariif ah!
"Kaniisadda waxaa loogu talagalay oo keliya khusaysayaasha."
Waxaad u badan tahay inaad maqashay hadaladan kahor. Waxay soo bandhigaan dareen ah in shucuur ahaan uu leeyahay wax laxiriira daciifnimo. Waxay dhahaan waa inaad noqotaa qof adag oo adag si aad noloshaada u horumariso oo aad u guuleysato. Nin ahaan waa inaad iska dhigtaa inaadan dareemin wax dareen ah. Sida naag dumar ah oo doonaysa inay ku guuleysato adduunka ganacsiga, waa inaad noqotaa mid adag, qabow oo shucuur leh. Haweenka dareenku boos kuma lahan dabaqa fulinta. Xaqiiqdii taasi ma runbaa? Ma inaan caadifad ahaanta nahay mise maya? Ma waxaan si caadi ah u nahay markii aan muujinno dareemo yar? Sidee buu Eebbe noo abuuray? Miyuu isagu noo abuuray sidii caadifad ahaan, noolaha dareenka ama maya? Dadka qaar waxay yiraahdaan ragga waa kuwa dareen ahaan yar sidaas darteedna waa sababta Eebbe u abuuray aadanaha inay ahaadaan abuuryo shucuureed oo aan yarayn, taasoo keentay in fikradaha badan laga qaato ragga iyo dumarka. Bulshada ayaa sheeganeysa in ragga ay yihiin kuwa caadifad ahaan ka hooseeya dumarkana ay yihiin kuwa dareen ahaan dareensan.
Bini aadamka waxaa lagu abuuray ekaanta Ilaah. Laakiin sawir noocee ah ayaa runtii ah? Bawlos wuxuu ka yidhi Ciise: "Isagu waa suuradda aaska aan la arki karin, oo ah curadka uunka oo dhan ka hor" (Kolosay 1,15). Si loo fahmo cidda aan ku nahay aragtida Ilaah, waxaan u baahan nahay in aan fiirino Ciise maxaa yeelay waa suuradda dhabta ah ee Eebbe, Aqoonsigeenna saxda ah, Shayddaanka, khiyaamadu, wuxuu rabay inuu na khiyaaneeyo aqoonsigeenna run bilowgii. Waxaan u maleynayaa adduunka shucuurta sidoo kale waa qeyb ka mid ah aqoonsigeenna Shaydaankuna wuxuu doonayaa inuu naga khiyaaneeyo dareenkeena. Wuxuu isku dayaa inuu naga dhigo inaan aaminsanahay inay daciifnimo tahay oo nacasnimo tahay in la dareemo dareemo isla markaana la siiyo fursad. Bawlos wuxuu ka sheegay Shaydaanka inuu indhihiisa galiyay kuwa aan rumaynin inay arki doonaan iftiinka dhalaalaya ee injiilka ammaanta Masiix, kan ah u-ekaanta Ilaah (2 Korintos 4,4).
Runtu waxay tahay: Ilaah waa shucuur! Dadku waa shucuur! Ragga waa shucuur! Daraasad dhowaan ay sameeyeen machadka cilmi-nafsiga (Mindlab) waxay ogaatay in ragga ay ka qalbi badan yihiin dumarka. Mid ayaa cabiray dareen-celinta shucuurta ee ragga iyo dumarka heerka nafsiyan. Waxaa la muujiyey in shucuurta badan lagu cabbiro ragga marka loo eego haweenka, laakiin maadooyinka imtixaanka ayaa dareemay inay yar yihiin. Haweenku waxay muujiyeen shucuurta yar markii ay cabbirayeen, laakiin waxay dareemayeen in ka badan maaddada ragga.
Bini-aadamku waa xayawaan nafsi ah. Dareenka shucuur ahaanta waxaa loola jeedaa in qofku ahaado. Iyo dhanka kale: In la foojignaado macnaheedu waa in aan ahayn bini-aadamnimo. Haddii aadan lahayn shucuur iyo dareen, markaa ma tihid qof dhab ah. Markii cunug la kufsado, waa wax bini-aadamnimo in aan wax laga dareemin. Nasiib darrose, waxaan hiigsaneynaa inaan xakameyno dareenkeenna sidii iyagoo xun, oo Masiixiyiin badan ayaa naftooda u huray fikirka Ciise xanaaqa. Isagu aad buu dareen ahaan u leeyahay iyaga. Iyagu ma ay yaqaaniin waxa ay ka fikiraan Ciise oo sidan oo kale sameeya: Oo wuxuu xadhko karbaash ka sameeyey oo kulligood ka wada eryay macbudkii iyo idihii iyo xoolihiiba, wuxuuna ku daadiyey kuwii wax beddelay oo jejebiyey miisaskii. (Yooxanaa 2,15). Sidoo kale garan maayaan waxay ka fekeraan Ciise ooyaya oo ooyaya saaxiib dhintey. Laakiin Yooxanaa 11,35 ayaa si sax ah u sheegaya arrintaas. Ciise wuu ooyay in kabadan inta aan ognahay. Lukas sidoo kale wuxuu taas ka sheegayaa: «Oo markuu ku soo dhowaaday, wuxuu arkay magaalada oo ku dul ooyaya» (Luukos 19,41). Ereyga Griigga ee qaylada micnaheedu waa inuu cod weyn ku qaylyo halkan. Waan ku faraxsanahay in Ciise xanaaqay oo muujiyey dareenkiisa - xiitaa haddii uu ooyayo. Waxaan doorbidaa inaan u adeego Ilaah qiiro leh halkii aan ka noqon lahaa mid aan miyir qabin. Ilaaha lagu muujiyey Kitaabka Quduuska ah waa Ilaah cadho, masayr, murugo, farxad, jacayl iyo naxariis. Haddii uusan Eebbe lahayn wax dareen ah, isagu dan kama gelin haddii aan galayno dabka weligiis ah iyo haddii kale. Si sax ah sababtoo ah wuxuu leeyahay dareen weyn oo noocan oo kale ah, wuxuu u diray wiilkiisa dunidan si uu u dhinto mar iyo dhammaan dadka oo dhan. Ilaah baa mahad leh waa qof qiiro leh. Dadku waa shucuur maxaa yeelay waa muuqaalka ilaah qiiro leh.
Dareenka waxyaalaha saxda ah
U oggolow naftaada inaad shucuur ahaato. Waa bini aadam, xitaa caqiido, inuu sidan oo kale noqdo. Ha u oggolaan sheydaanka inuu kaa dhigo bina-aadam. U soo ducee inuu Aabaha jannada kaa caawiyo inaad dareento shucuurta waxyaabaha saxda ah. Ha ka xanaaqin qiimaha cuntada oo sarreysa. Ka xanaaq dil, kufsi, iyo faraxumeyn caruur. Ciyaaraha TV-ga iyo kumbuyuutarradu way sii deyn karaan shucuurtayada. Way fududahay in la gaaro meesha aan hadda dareemayn waxba, xitaa Masiixiyiinta loo dilay diintooda. Anshax xumada aan ku aragno TV-yada iyo shineemada, ee loogu talagalay carruurta agoonta ah ee ay sabab u yihiin HIV iyo Ebola.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dembigu waa musuqmaasuqa shucuurkeenna. Mar dambe garan mayno waxa ay tahay waxa la dareemayo. U soo ducee inuu Ruuxa Quduuska ahi bogsiiya noloshaada shucuurta iyo inuu shucuurtaada u beddelo wixii Ciise ku lahaa Ruuxa Quduuska ah. Si aad ugu qaylin karto waxyaabihii uu Ciise u qayliyay, waxaad uga xanaaqdaa waxyaabihii Ciise u xanaaqay, waxaadna dareemaysaa inaad ku qanacday waxyaabihii Ciise xiisaha u qabay.